Ahoana ny fomba hanonganana ny htc Hero aorian'ny fanavaozana | Androidsis
FOMBA FANAFOTOTRA FOTOTRA HTC HERO AORATRA FANARITRA
sik_gerar | | Android Root, Rom, Tutorials
Amin'ity lahatsoratra ity aho dia hiezaka hanampy ny olona izay, toa ahy, nanatsara ny htc Hero anao tsy ho ela, ary tsy fantany izay nateraky ny fanavaozana ny Orange ary navoakany nefa tsy nieritreritra izy.
NAOTY 1: manan-kery ho an'ny kinova rehetra an'ny firmware RUU 2.73, fa raha manana iray alohan'ny 2.73.61.5 ianao dia ho mora kokoa aminao ny mampiasa flashrc hametraka hboot vaovao ary hahafahanao manongotra na mametraka ROM fanao.
NAOTY 2: Tsy mitandrina izay ataonao amin'ny anao aho Htc Hero, ho an'ireo lahatsoratra hitako na tao amin'ny forum Modaco na tamin'ilay xda Samy nahavita tsara ny olona rehetra, saingy mety hanao izany ianao raha tsy misy atahoranao.
ary hoy io ..
Fandinihana ny olana:
Raha tsy fantatrao izay lazaiko, ny tiako holazaina dia ny fanavaozana ny Orange 1.5 izay azo sintonina avy amin'ny tranokala htc, ary avy amin'ny alàlan'ny OTA (mitsambikina amin'ny finday ny fanavaozana raha manana safidy azonao atao ianao ), Inona efa nilaza taminay izahay fotoana vitsy lasa izay.
Htc Hero miaraka amin'ny firmware 2.73.61.5 (azonao atao ny mahita an'io sanda io amin'ny toe-javatra> momba ny telefaona)
Micro SDHC (mendrika ilay ho avy)
QMAT 5.6 (manana kinova andrana ianao 10 minitra Eto)
Android SDK (efa nohazavainay ny fomba fampiasana azy eto)
mpamoaka hex (toy ny HxD)
kinova firmware iray hapetraka aoriana, toy ny iray ofisialy (2.73.405.5) na iray amin'ireo modaco
faka avy hatrany
fanarenana an'i cyanogen novain'i modaco
Dingana teo aloha:
Voalohany indrindra, toy ny mahazatra, dia tsy maintsy manao zavatra sasany isika.
Arovy ny karatrao micro SDHC. Koa satria hamolavola azy io isika, manaova backup ny karatra amin'ny solosaina miaraka amin'ny atiny rehetra. Tokony holazaina fa ny olana dia fantatra fa TSY NY KARAZANA SDHC micro rehetra miasa amin'ity fomba ity.
Famerenana ny nandanao, ka raha misy zavatra ratsy mitranga dia afaka miverina amin'ny fanjakana teo aloha ianao.
Ary rehefa nahazo antoka ny telefaona sy ny fahatsiarovana dia nanohy niasa kely tamin'ny adb sy ny browser izahay, miampy ny cryptography sasany ..
Manokatra ny console izahay, mivezivezy any amin'ny lahatahiry / fitaovana / del Android SDK ary manoratra izahay
saka adb akorandriaka / sys / kilasy / mmc_host / mmc1 / mmc1: * / cid
Adikao ny kaody naverin'ny adb, ary azonay atao ny manidy ny adb
manokatra Qmat izahay, ary mandeha haingana any amin'ny Cyptoanalysis Tools> Crypto Toolbox.
Ao amin'ny faritra ambany dia apetakay ny kaody CID, ary kitiho ny «Reverse String». mahazo kaody izay horaisinay ohatra izahay: 532600bd227d9c0347329407514d5402.
mandika ny kaody izahay ary manidy ny fampiharana. Mandeha eto izahay ary miditra mailaka ary ny CID MIARAKA ZERO 2 miandoha ireo isa roa voalohany. Mandefa zip iray ho antsika amin'ny mailaka izy ireo. (aza manahy fa mahomby amin'ilay maherifo ihany koa)
«002600bd227d9c0347329407514d5402» en vez de «532600bd227d9c0347329407514d5402»
Izahay dia misintona ny zipin'ny mailaka ary mamaha izany amin'ny fampirimana rehetra. manomboka ny hex editor izahay.
Ao amin'ny "Extras> Open Disk" dia misafidy ny karatra sd an'ny findainay izahay ary esorinay ny safidy "Open as Readonly". manome OK izahay.
Ao amin'ny "Extras> Open Disk Image" dia misafidy izay nongotinay avy amin'ny zip (goldcard.img). mahazo varavarankely 2 izahay, ny iray ho an'ny karatra ary iray ho an'ny sary.
rehefa miseho ny varavarankely mangataka "Sector size" dia manome 512 (kapila mafy / kapila Floppy) izahay ary OK.
tsindrio ny varavarankely sary, avy eo "Edit> Select All", ary "Edit> kopia"
tsindrio ny varavarankely sd, safidio ny offset 00000000-00000170 (INDRINDRA NY LALANA 00000170), ary kitiho ny "Edit> Paste Writing".
"File> Save" ary afaka manakatona ny hex editor izahay.
vantany vao nahavita an'io isika dia afaka mamerina ilay maherifo amin'ny alàlan'ny karatra nampidirina
Raha vantany vao vita izany dia afaka mamaka amin'ny fomba mahazatra isika Mahery fo htcna manafatra rom vaovao araka ny voalaza etsy ambany. Raha tsy misy miasa ho anao ny iray amin'izy ireo dia tohizo ny famakiana satria misy ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra.
Mamelombelona fanarenana vaovao:
Raha te hametraka ny fanarenana ny modaco isika dia tsy maintsy mampidina azy io aloha
sintomy ny rakitra ary esory izy. mariho fa ao anatin'izany ny zavatra rehetra ilainao, raha ananantsika ny Android SDK mety namerina zavatra izahay
sokafy ny console ary mizaha mankany amin'ilay lahatahiry noforoninay.
mihazakazaha manaraka ireto baiko manaraka ireto
adb shell reboot bootloader (miandry ny fitaovana hamerenana amin'ny bootloader)
bootboot fastboot cm-hero-recovery.img
adb shell mount / sdcard
adb push cm-hero-recovery.img /sdcard/cm-hero-rec Recovery.img
adb shell flash_image recovery /sdcard/cm-hero-rec Recovery.img
ary vonona! Efa napetraka ny sitrana. hiditra ny tsarovy fa miditra an-trano + hery ianao.
Mamelatra rom vaovao:
Efa maro ny mpitari-dalana momba an'io, saingy tonga haingana isika:
Mametraka flashrec ao amin'ny terminal izahay (kopianay ny .apk amin'ny karatra, ampandehanana ny safidy hametrahana rindrambaiko an'ny antoko fahatelo amin'ny safidin'ny maherifo, ary miaraka amina mpitety rakitra ao amin'ilay maherifo ampiorintsika azy)
Adikao ny hboot / rom vaovao izay tianay hapetraka amin'ny karatra sd (tena amporisihiko ny handika azy io amin'ny ROOT an'ny karatra, fa tsy ao anaty fampirimana), manome anarana azy io update.img
manatanteraka flashrec izahay ary ao amin'ny bara soratra no soratantsika:
sdcard / update.img
manavao izahay. Aorian'izany dia afaka manomboka indray isika hahita ny fiovana amin'ny flashboot, na ny mahita ny rom vaovao napetraka.
Atsofohy ny fanarenana vaovao hametrahana rom manokana:
Raha tratranao io teboka io dia satria tsy niasa ho anao ireo teo aloha (tahaka ny nanjo ahy). Eny, tena tsotra izany:
apetrakao ny faka eo noho eo
manoratra amin'ny console izahay
miaraka amin'izay ahazoantsika sary masina toa an'io $. manoratra izao izahay:
ary izao dia lasa majika ilay $. ho dingana farany, manoratra izahay:
fanarenana flash_image /sdcard/cm-hero-rec Recovery.img
ary mamerina antsika amin'ny # nefa tsy milaza zavatra hafa aminay. Ankehitriny isika dia afaka mamaha ny tariby, manala ny batery, mamerina azy io ary manomboka amin'ny bokotra «antrano» tsindry. Tokony hahazo ny efijery fanarenana doka vaovao miaraka amin'ny safidy vaovao ianao. Manomboka eto dia azonao atao ny mametaka fanarenana mahazatra (apetrakao ao amin'ny faran'ny karatra miaraka amin'ilay anarana hoe update.zip ny fanavaozana, manomboka amin'ny fomba fanarenana ianao ary manome ny safidy hametraka anao irery ilay fanavaozana).
SOURCE >>>forum.xda-developers.com ary android.modaco.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » FOMBA FANAFOTOTRA FOTOTRA HTC HERO AORATRA FANARITRA
68 hevitra, avelao ny anao
Azonao atao ve ny mazava kokoa amin'ity dingana ity? adb shell / sys / class / mmc_host / mmc1 / mmc1: * / cid aiza no hametrahako izany? Fantatro fa tokony hanokatra dos aho, ary avy eo folder inona no tokony hosokafako ny SDK raha, fa avy aiza? Miala tsiny fa tsy dia fantatro loatra.
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara, heveriko fa mihoatra ny iray no ho faly amin'ity boky torolàlana ity
sik_gerar dia hoy izy:
Mazava ho azy fa afaka manampy anao aho!
Amin'izay torolàlana rehetra vakianao izay misy ny baiko adb, dia hazavaina foana, noraisiko ho azy fa fantatra izany.
Tsy maintsy tsindrio ianao amin'ny fanombohana- fanatanterahana- ary ny fanoratana cmd dia mahazo console MSdos manondro eto izahay:. Eny manana ny sdk napetraka ao amin'ny c: / android / izahay satria hitety an'io fampirimana io amin'ny fanoratana
cd fampirimana mitondra anao any fampirimana
Cd .. mitondra anao any amin'ny fampirimana etsy ambony
Lisitr'i Dir ny fisie ao anaty fampirimana ankehitriny
Raha vantany vao nahatratra ny fampirimana fametrahana android isika dia miditra ao amin'ny fampirimana fitaovana
Ary izao isika dia ao amin'ny c: / android / fitaovana / afaka manoratra ny baiko tadiavinao izahay.
Mamaly an'i sik_gerar
carjigo dia hoy izy:
Salama, manandrana ny dingana voalohany aho fa miditra
adb shell / sys / class / mmc_host / mmc1 / mmc1: * / cid; arotsany amiko ity manaraka ity
lesoka: tsy hita ny fitaovana
Mamaly an'i carjigo
mety tsy napetrakao ny mpamily ADB. andramo ny mampifandray ny telefaona amin'ny solosaina ary manorata amin'ny solo-sainao
> fitaovana adb
avy amin'ny console amin'ny toerana nanoratanao izany baiko izany. Raha tsy mahazo lisitry ny angona avy amin'ny findainao izy dia tsy mamantatra izany.
Raha hametraka azy, esory ny telefaona, mankanesa any amin'ny start-control panel-system-device manager- mitady ny telefaona ary esory ny mpamily. dia ampifandraisinao amin'ny seranana hafa, ary rehefa mangataka aminao ny mpamily ADB dia asao izy "mifidy toerana" ary jereo ao amin'ny folder android sdk:
\_\_ android-sdk-windows-1.6_r1 \_ usb_driver \_
na amin'ny iray amin'ireo lahatahiry ao anatin'io iray io. rehefa apetrakao dia andramo atao indray
Raha mamaly anao ny angon-drakitra telefaona dia efa napetraka ny mpamily ary azonao atao ny manaraka ny torolàlana amin'ny dingana very anao.
vintana sy fankaherezana 😉
Salama d indray, handeha amin'ny dingana faha-6 aho
Ao amin'ny fanitsiana hexadcimal aho ary tsindrio indroa ny farany ambany ankavia amin'ny offset, napetrako ny adiresy nolazainao (00000000-00000170) ary omen'ny editor ahy ity lesoka manaraka ity
Ny isa napetraka dia misy mari-pamantarana miiba izay tsy nampoizina
raha afaka manampy ahy hametraka an'io adiresy io ianao,
Efa voavaha io, misaotra betsaka amin'ny fanampiana hatreto,
Hanaraka ny dingana manaraka aho raha mila fanampiana bebe kokoa,
misaotra ary salu2
antocara dia hoy izy:
Okay . Misaotra anao
Mamaly an'i antocara
Tonga eto indray aho, aorian'ny fanaovana ny dingana voalohany hamongorana aorian'ny fanavaozana, tsy maintsy manaraka ny dingana tokony hatao aho mba hananana faka mahazatra araka ny url (https://www.androidsis.com/como-tener-acceso-root-en-un-htc-hero/), manana ny malefaka rehetra sy ny zavatra rehetra voalaza aho, manomboka mametraka ny torolàlana voalohany (fastboot boot cm-hero-recovery.img) ary mahazo ireto manaraka ireto aho:
misintona ´boot.img´… TSY NOHO
afaka manampy ahy ve ianao,
Miteny anao fotsiny ve izany sa milaza zavatra hafa aminao? Raha ny marina, raha nanaraka ity torolàlana ity ianao dia tsy tokony hanaraka ilay iray hafa, satria ho an'ny zavatra mitovy izy ireo fa avy amin'ny kinova rindrambaiko samihafa, ka tsy mendrika izany ny iray raha toa ka mila manaraka an'io ianao.
Raha vantany vao nahavita ilay karatra volamena ianao ary nampidirina sy notsapainao dia andramo ny ampahany farany:
ary raha manova anao amin'ny # ka hatramin'ny $ izy, dia nahavita zavatra tsara ary manana tombony ho an'ny superuser. ka raha manao izany ianao
$ flash_image recovery /sdcard/cm-hero-rec Recovery.img
Hametraka ny fanarenana vaovao izy ary afaka manomboka indray amin'ny fastboot tadiavinao.
hello sik_gerar, rehefa avy nanao ny dingana voalohany voalaza ao amin'ny boky torolàlana aho dia nanova kisoa tamin'ny faran'ity (Raha vantany vao vita ity dia afaka mamaka amin'ny fomban-kevitry ny mahery fo isika. tsy mahalala izao dia raha tsy maintsy manaraka ity boky torolalana iray manontolo ity aho na inona no hatao hamongorana ilay maherifo,
Mametraha flashrec ary ampidino ny fanarenana modaco, ento flashrec avy amin'ny finday, apetraho amin'ny alàlan'ny fanoratana ny adiresy ny karatra sd eo am-baravarankely misy anao ny fanarenana.
> sdcard / modacorec Recoverycomotulohayascalamado.img
ary rehefa vita dia averinao indray ny telefaona ary averinao amin'ny FANORENANA NY FIVARENANA FOTOTRAN-TRANO mandritra ny fotoana rehetra mandra-pahatongan'ny fivoahana.
raha azonao ny fanarenana cyanogen dia vitanao tsara izany. manomboka eto dia afaka manao zavatra ianao. ohatra, alainao ny modaco rom, tahirizo ao amin'ny fakan'ny karatra sd, avy eo mamerina amin'ny laoniny ny fanarenana ary lazao hoe "apetraho ny fanavaozana zip" ary azonao ny lisitry ny zip izay anananao ao amin'ny faka. Misafidy ny Modaco iray ianao ary mametraka azy ho anao. mitovy amin'ireo kinova vaovao amin'ny radio sy lohahevitra ary zavatra hafa rehetra tonga amin'ny endrika azo apetraka.
negina dia hoy izy:
Salama. Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Manana iray amin'ireo avy any Orange aho ary te hametraka ilay romam-panjakana. Miresaka sary rom ianao fa azo sintomina ve exe?
Misaotra ary salu2.
Mamaly an'i Negin
alfon dia hoy izy:
Salama, jereo ny dingana voalohany ary rehefa miditra ny kaody «adb shell cat / sys / class / mmc_host / mmc1 / mmc1: * / cid» dia «tsy hita» ihany aho ... tsy haiko ny antony fa izaho tsy mahita ny kaody CID izay ?? ?? azafady fanampiana kely?! Teny an-dalana ve rehefa manondro ny fanavaozana ny 2.73.61.5 no isan'ny fanangonana? Vaovao aho amin'ireto zavatra ireto ... rehefa manontany momba ny telefaona aho dia mahazo firewall 1.5 kernel version 2.6 27-8 sy ny compilation number 2.73.61.5…. Tokony hamaka azy io amin'ity fomba ity aho sa tsia?
Mamaly an'i alfon
Raha hametraka ny rom ofisialy mankany amin'ny pejy htc ary araho ity torolàlana ity:
fa tsy izany tsipika manoratra izany
Raha tsy manana kaody sy ny toy izany ny maherifonao dia tsy manana ny mpamily adb napetraka ao amin'ny solosainao ianao. Hamarino tsara fa manana tariby USB mifandray amin'ny telefaona ianao ary manana Fastboot sy ADB napetraka ao amin'ny solosainao ary manana ny mpamily napetrakao, izay ao amin'ny SDK ao amin'ny folder x86.
esory ny mpamily htc amin'ny solo-sainanao, ary rehefa manontany anao ny mpamily ADB dia ilazanao azy fa te hifidy toerana amin'ny solosaina ianao ary mankanesa any amin'ny fampirimana android, raha ny amiko:
> E: android-sdk-windows-1.6_r1usb_driver
ary eo ianao dia mahazo rakitra izay mpamily tadiaviny. Aorian'izany dia azonao atao ny mihodina ny adb ary avelao ny solosaina hahafantatra azy.
rohy ilaina roa:
Valiny tamin'i Gerardo
Salama sik_gerar, toa ny hoe raha nahavita tsara aho dia efa mivoaka ny fanarenana cyanogen, misaotra betsaka noho ny fanampiana, izao hanohizana zavatra hafa, inona no rom de modaco omenao ahy ary aiza no ahitako misy ny romana ary jereo hoe iza no tsara kokoa,
forum forum mahery fo:
fanavaozana mahery fo tsy voakitika, kinova radio vaovao. manomboka eto ianao dia mahazo ireo kinova amin'ny radio, mijery indraindray mba hanavaozana azy, ary raha tsy mila rom manokana ianao fa htc tsotra misy faka:
romana manokana modaco:
ny tolo-kevitro: modaco 2.9 manala ireo programa tsy tianao amin'ny apetrany, ary ny lohahevitra mazava toy ny lakolosy), no napetrako, miaraka amin'ny kinova radio farany.
Gerardoo ... Nanandrana nanala ny mpamily htc aho ary tsy avelany ... ary avy eo namoaka uninstall tao amin'ny manager hardware momba ilay fitaovana USB phone htc izay nesoriko avy eo aho dia nanandrana mamafa ny fisie. avy amin'ny fampirimana mpamily hrc, ary avy eo nalaiko ny maherifoko dia nesoriko izy ary naveriko namboarina indray nefa tsy milaza amiko na inona na inona tokony hametrahako zavatra ... .. Tadidiko fa tamin'ny fotoana voalohany nametrahako ny htc sync dia nanome ahy hadisoana aho satria ny làlan'ny mpamily dia tamin'ny teny Anglisy, ary nametraka azy io tamin'ny tanana aho, ary nisy zavatra ADB niseho tamiko, fa izao rehefa miala aho dia tsy misy na inona na inona miseho, milaza fotsiny aho fa efa napetrakao io ary vonona ianao mampiasa…. ary tsy azo atao izany satria efa nesoriko daholo ny zava-drehetra .. mety nijanona tao amin'ny rezistra windows ??…. Miala tsiny aho fa tena patasooo tamin'ireto zavatra ireto…. Noheveriko ho mora tamin'ny voalohany fa… izao hitako izao…. Sarotra izany .. saingy tsy tiako ny manomboka zavatra iray ary tsy mahavita azy…. mba ampio azafady?! Afaka manome ahy ny fahendreny va ny olona tsara fanahy iray? !
ahhhh porciertooo izao rehefa miditra ny baiko amin'ny cmd dia mametraka fitaovana tsy hita aho… .ary tsy namela ahy fotsiny ilay izy…. nandroso kely aho! XD
Eny, voalohany indrindra, misaotra anao tamin'ny fotoana natokanao ho an'ireo vao teraka toa ahy hahafantatra kely ny fomba fiasan'ny bibikely maitso sy ny fomba hivoahana bebe kokoa amin'izany. Raha tsy teo ianao dia tsy ho tanteraka ho an'ny mpampiasa tsotra toa anay izany.
Mifanaraka amin'ilay lohahevitra, te-hametraka fanontaniana vitsivitsy aho alohan'ny hidirako miasa ary, mihoatra ny zava-drehetra, alao antoka fa tsy hitondra ny HTC Hero izay vao 7 andro monja mankany amin'ny fasana aho;
1- Hitako tao amin'ny Twitter's HTC fa hamoaka 2.0 ho an'ny Hero izy ireo. Midika inona izany? Hofoanantsika ve izany rehetra izany mba hahafahantsika manavao azy ireo sa hamoaka rom novaina misy ny kinova 2.0? Mendrika ovaina dieny izao ve sa tsara kokoa ny miandry?
2 - Amin'ny dingana voalohany dia miresaka momba ny fanaovana backup amin'ny sd ianao ary ny iray hafa amin'ny nand. Inona ny nand? Ahoana no anaovanao izany?
3 - Misy olona afaka mandefa rohy miasa QMAT ve?
4 - Raha mijanona amin'ny teboka iray aho. ... noho ny lesoka, amin'ny resaka adala na satria tsy manana hevitra ra mihintsy aho ... Inona no ataoko? Ahoana no hamerenako ilay milina? Very ny fampahalalana tena ilaina amin'ny rafitra fiasa?
Misaotra anao nanampy. fiarahabana
@alfon: ny olanao dia amin'ny mpamily, raha vantany vao amboarinao io dia hirodana ny ambiny, fa tsy afaka manampy anao fotsiny aho raha mihazakazaka toa ahy ianao amin'ny Linux, azafady.
@pedro: jereo ireo fanehoan-kevitra 3 4 etsy ambony, eo amin'ny pejy se modaco dia manana ny fanavaozana rehetra nivoaka avy amin'ny HTC ianao miorim-paka ary novaina ihany koa. izay ataonao izao mba hamongorana azy io dia mety aminao avy eo rehefa manavao ianao.
Ny nand dia fahatsiarovana ny telefaona izay ametrahana ny rafitra fandidiana, tsara raha fintinina. Mikaroha nandroid ao amin'ny Google. rahoviana. amboary ny fanarenana manana izany ao anaty menio ihany koa ianao ary afaka mamerina ny telefaoninao raha manodina azy ianao. Amin'izao fotoana izao, manaova backup amin'ny programa rehetra avelan'izy ireo hialana amin'ny fahaverezan'ny data, ary koa kopian'ny karatra SDo amin'ny solosaina sao sanatria.
Google kely ho an'ny qmat, raha tsy hitanao io dia tadiaviko ilay rohy niaviko, na dia azoko antoka fa ao anatin'ny iray amin'ireo mpitari-dalana xda developer izany.
Ny hany dingana mampidi-doza dia ny manoratra amin'ny nand. Raha mbola tsy lany bateria ianao amin'izay dia handeha tsara daholo ny zava-drehetra, aza manahy.
Misaotra tamin'ny valiny. Fanontaniana farany momba ny rôma.
Moa ve ny tolo-kevitrao hampiasa rom ofisialy na haneso?
Azoko tsara fa ny fanovana no manatsara ny fahombiazany, ny olana famindrana rakitra Bluetooth. Fa tiako ho fantatra ny hevitry ny olona mampiasa azy ireo, hanapahana hevitra momba ny iray na ny iray hafa.
Raha tianao ny hevitro, atombohy amin'ny rom modaco izay tsy miova fa miorim-paka. ity fomba ity izao dia afaka mihodina amin'izay tadiavinao ianao, azonao antoka fa manana varavarana misokatra ho an'ny modaco (na hafa) sy fanavaozana ofisialy ho avy ianao, ary hitohy tsy misy fanovana.
ny zava-dehibe dia ny anovanao ny fanarenana, satria afaka mametraka izay tadiavinao ianao avy ao.
Raha tsy te hanana kinova miorim-paka ianao, amin'ny fanarenana novaina dia azonao atao ny mametraka kinova ofisialy tsy misy faka, izay ampidininao avy amin'ny tranokalan'ny modaco:
tapany voalohany: romana miorim-paka (rom romana amin'ny fakany)
tapany faharoa: roms fandefasana (kinova tsy manova na inona na inona)
fizarana fahatelo: romana tafaporitsaka (kinova mivoaka aloha)
fizarana fahefatra: radio (fanavaozana izany isaky ny afaka ianao!)
tapany fahadimy: rom ho an'ny fanao (novaina ny volo, misy faka)
Manoro hevitra anao aho hampidina azy ireo eto fa tsy amin'ny pejy htc ofisialy, satria amin'izany dia tsy manosotra ny fanarenana novaina izy ireo ary afaka manandrana zava-baovao hatrany (ary manao backup backup, yyy ...)
sik_gerar dia nampifandray ny maherifoko htc tamina solosaina hafa aho, ary tsy nisy ny mpamily na inona na inona, ary tsy mila mametraka ny ADB na zavatra hafa aho…. Raha ny fahitako azy dia toy ny singa kapila fotsiny, mety misy olana ve amin'ny htc rehefa manavao azy io amin'ny kinova 2.73…? ary noho izany dia mandeha izy rehefa mampifandray ny usb dia manaiky ahy ho kapila kapila izy? olona manana xp ve izany no mitranga?!
Salama Sik_gerar, tsara ny nanarahako ireo dingana notondroinao ary manana ilay mahery fo miaraka amin'i Orange Rom tany am-boalohany aho. Nanandrana tamin'ny app Better Terminal aho hanoratra -su- ary mamerina #. Nolazaiko anao fa izao no fitsapana hahitana raha miorim-paka izy io.
Eny, nisintona ROM 2 ihany koa aho ny farany avy amin'ny modaco sy ny original original. Saingy eto aho dia nijanona. Ao amin'ny lesona dia misy resaka flashing miaraka amin'ilay sary. Fa hitako fa ao amin'ny zip dia misy rakitra maro kokoa. Ary aleo tsy lazaina amin'ny tranga misy ny modaco novaina fa raha tsy diso aho dia misy rindrambaiko sasany. Izaho, tsy mahalala ahy, dia namaha ny paositry ny zip, naka ny img, namindra azy tamin'ny karatra SD ary nametaka azy tamin'ny flahser Recovery. Namerina namerina ilay maherifo aho, ary toa nilamina ny zava-drehetra. Nandeha nijery ny kinova Kernel aho ary hitako fa mbola mitovy ihany ny fanangonana 2.73.61.5, raha ny tena izy rehefa manomboka ny maherifo dia mipoitra hatrany ny sarimiaina Orange.
Ny fanontaniako dia: takiana ve ny fisarahan'ny SD?
Novakiako tao amin'ny forum xda fa alohan'ny hametrahana rom «Tsy maintsy manana ny radio marina sy SPL farany ianao! Azonao jerena eto izy ireo (RADIO TSY MAINTSY INDRINDRA aloha) »Inona no dikan'izany?
Ahoana ny fomba fametrahana ROM. Vita avy amin'ny fisie ZIP amin'ny fomba fanarenana ve izany na miaraka amin'ny img mivantana miaraka amin'ny application Recovery flahser?
Miala tsiny amin'ny fanaintainana, saingy nanandrana nitady an'ity fampahalalana ity aho tao amin'ny forum ary samy manana ny kinovan'ny sarimihetsika ny tsirairay avy ary mikorontana aho.
Oh oh. Mihevitra aho fa misy zavatra tsy mety. Tsy afaka miditra amin'ny Recovery Flasher intsony aho, ary avy amin'ny fampiharana dia manome ahy hadisoana aho raha manandrana mamerina na mametraka ny sitrana indray. TSY NAHOMBY I Fals: Tsy afaka nandidy baiko
Uff. Ratsy kokoa ny toe-javatra. Tsy avelako hampiasa ny WIFI aho. Inona no azoko atao?
andao jerena i Pedro:
Taorian'ny fametrahana ny fanarenana dia nolazaiko anao fa ny fanavaozana rehetra dia tokony hatao avy ao. raha te hanavao ny zavatra tsy maintsy ampidirinao ny zip ary hitahiry azy ao amin'ny faka-karatra TSY MISY TSY MANDROSO, dia milaza aminao mazava tsara ny modaco ao amin'ny pejiny, saingy mila mamaky zavatra alohan'ny hanaovana azy ianao. azo antoka fa nametraka ny img rom iray tamina flashrec ianao, ka nanapotika ny fanarenana efa azonao.
REHEFA MAMetraka IMG ianao dia HOSY REHETRA NY RADIO, NY FITSABOANA, ARY NY ROM INDRINDRA.
aza matahotra fa misy vahaolana ny zava-drehetra.
Raha tsy hitanao ny fanarenana, ny zavatra tsy maintsy hataonao dia (raha manana faka ianao) dia ampiasao flashrec hametrahana ny fanarenana indray (eny, amin'ny endrika img). raha tsy manana faka ianao dia mila mamerina ny karatra volamena.
Raha vantany vao vita ny fanarenana dia alainao avy amin'ny pejy modaco ny radio farany, tahirizo ao amin'ny ZIP FORMAT ao amin'ny faran'ny karatra, ary amin'ny fanarenana hoy ianao "apetraho ny fanavaozana zip" ary fidio ny radio amin'ity lisitra manaraka ity izay vao avy nampidina, dia hangataka anao tsindrio trano raha te hanohy, ary hametraka azy ho anao. Izany dia tokony hanala ireo olanao Wi-Fi (raha mahazo sary famantarana Wi-Fi miampita ianao dia programa kely mametaka ny modaco rom, nesoriko izy satria tsy manome na inona na inona ahy, mitaky toerana ary manjavozavo izy io).
raha vantany vao tonga amin'ity fotoana ity ianao dia efa fantatrao tsara ny mametraka roms vaovao amin'ny tranokalan'ny modaco (mametraka toa ny radio izy ireo) na mikorontana any aoriana.
@alfon: amin'ny solosaina izay tsy nametrahanao mpamily akory hanombohana-> fanaraha-maso tontonana-> rafitra-> mpitantana fitaovana ary zahao raha mahazo zavatra misy kisary mavo ianao, raha mahazo ilay kisary adb dia lazao azy fa tianao izany havaozy ny mpamily ary tadiavo ny mpamily ao amin'ny folder SDK android (mazava ho azy, tsy maintsy ataonao amin'ny solosainao ity).
raha vantany vao vita izany dia tokony hamaly anao zavatra aho rehefa manao
yep, tsapako rehefa avy niodina aho. Tena notarihin'ny teboka faha-3 amin'ilay lesona milaza aho fa »3. manatanteraka flashrec izahay ary ao amin'ny bara soratra soratantsika:
sdcard / update.img »Namaky momba ny img aho ary tsy nieritreritra izany intsony. Hitako fa ao anatiny misy img sy elatra, pinion.
Saingy voavaha daholo ny zava-drehetra. Nahavita nametraka ny fanarenana RA-HERO-v1.2.3 aho ary tonga lafatra ny zava-drehetra. Avy eo dia nanandrana nametraka ny Modaco 2 ROM aho fa taorian'ny fametrahana dia tsy namboariny ny telefaona. Ho hitako ny sary famantarana Android avy eo ny sary famantarana HTC ary tsy tokony hanomboka ny telefaona dia nijanona tao anaty tadivavarana. Sarimiaina Android, sarimiaina HTC toy ity 30 min.
Ka nametraka ilay ROM niorim-paka tany am-boalohany aho.
Raha ny marina, raha tsy diso aho dia efa nomen'ny RA_HERO safidy hisaratsaraka ny karatra SD amin'ny Fat32, Ext3 ary Swap. Ankoatry ny fananana ny safidin'ny backup Nandroid ary avereno. Fahitana zavatra tsara ho ahy.
Misaotra amin'ny fanampiana.
sik_gerar Peroo tsy miseho amiko ao amin'ny ADB fa kapila kapila fotsiny no miseho…. ary mametraka ny tenany…. tsy mangataka mpamily amiko izy io ... ary tsy hitako izay hatao izao ..
@pedro: Izaho koa dia nanana an'io loop io, nesorina ilay sd ary averiko indray dia raikitra.
@alfon: zahao tokoa ny mpitantana ny fitaovana, tokony hahazo ny ADB ianao raha tsy apetraka. Tsy olana amin'ny android fa an'ny mpamily
sek_gerar Mampanantena anao aho fa tsy miseho izany amiko…. Saingy azoko ihany koa io, nefa mampanantena anao aho fa tsy hivoaka mihitsy, ary toa hafahafa amiko izany!
micky14 dia hoy izy:
Salama, vao nividy HTC Hero avy tany Orange aho, mbola tsy nanavao azy fa tsy afaka manao Root amin'ny iray amin'ireo fomba roa ireo satria milaza amiko foana ny fitaovana tsy hita, tsy hitako izay hatao izao. Nesoriko sy nametaka azy indroa aho ary mitovy foana. Andao hojerentsika raha misy afaka manampy ahy. Misaotra anao
Mamaly an'i micky14
petraima dia hoy izy:
@ micky14. Izaho koa dia nandalo fitsapana tamin'ny HTC, herinandro vitsivitsy monja no niarahako io ary ny fakany dia odyssey.
Tamin'ny farany azoko ilay izy ary mila miaiky izany amin'ny fomba tsotra aho. Raha sanatria mety amin'ny olona io dia hazavaiko ny nataoko. Ary raha misy mahita zavatra tsy mety dia lazao, fa niasa ho ahy izy ary manana azy miaraka amin'ny kinova Modaco farany indrindra aho ary miasa toy ny hatsarana miaraka amin'ny onjan-dranomasina tafiditra ao.
Andao hojerena. Ary alohan'ny hanaovana na inona na inona, manoro hevitra anao aho mba hanao backup ny contact-nao sy ny SD, raha efa nafindranao tany amin'ny Hero-nao.
Na dia tsy ny dingana manaraka aza dia io no nandaniako vola be indrindra amin'ny famolavolana ny karatra SD mba hahafahanao mametraka ny rindranasa any aoriana fa tsy handany loharano.
Ity misy lesona momba ny fomba famolavolana azy amin'ny Ubuntu (Linux).
Ilaina ny fanaovana izany. Tsy afaka nahazo ny mazika fizarazarana aho mba hahitana ny karatra SDHC.
Eny, aorian'ity fahanginana ity dia tonga ny fotoana hanombohana mahandro ny raharaha.
Esorinao ny karatra SD anao ary ampidiro ao anaty solosainao, miaraka amina mpamaky karatra na izay tianao.
Ampidininao ireto rakitra roa ireto:
Ary ny sary fanarenana mahery fo an'ny AmonRa
Adikao amin'ny fakan (tsy tafiditra ao anaty fampirimana) an'ny SD-nao ireo rakitra roa ireo.
Napetrakao ao amin'ny Hero-nao ny SD.
Misintona ny tsena Android amin'ny maherifonao ianao, ity programa eoeAppInstaller manaraka ity, izay ampiasaina hametrahana fampiharana avy amin'ny SD.
Manomboka ny eoeAppInstaller ianao ary hiseho ireo rindranasa azonao apetraka amin'ny SD-nao. Misafidy ny hametraka ny FlashRec ianao.
Rehefa vita ny fametrahana dia mandehana any amin'ny efijery ny programa rehetra an'ny Herto anao ary sokafy ity programa vaovao hiseho miaraka amin'ny anarana Recovery Flasher ity.
Kitiho ny bokotra Backup Recovery Image ary andraso ny hamaranana azy. Amin'izany ianao dia hanao backup amin'ny fanarenana anao ary ny fampiharana dia hitahiry kopia ao amin'ny fakan'ny SDCard miaraka amin'ilay anarana fanarenana-backup.img. Manoro hevitra anao aho mba hanao kopian'ny fisie amin'ny solosainao amin'izay mety hitranga.
Raha vantany vao manana ny kopian'ny sitranao tany am-boalohany ianao dia hampiditra ny fanarenana AmonRa. Ao amin'ny faritra an-tsoratra izay misoratra voalohany dia soraty: /sdcard/Rec Recovery-RA-HERO-v1.2.3.img ary kitiho ny bokotra Flash Recovery Image ary miandrasa kely.
Raha misy tsy mety dia azonao atao ny mamerina ny dika mitovy amin'ilay fanarenana tany am-boalohany izay nataontsika teo aloha, miaraka amin'ny bokotra Restore Backup
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra. Vonona ny hametraka ROM vaovao ny HTC-nao.
Ny dingana manaraka dia ny famolavolana ny SD-nao, raha mbola tsy nanao izany ianao, manaraka ny fampianarana nomeko teo aloha.
Ary ankehitriny tsy maintsy misafidy ny ROM tianao hapetraka ao amin'ny masininao ianao. Ny iray tany am-boalohany dia nihodina niaraka tamin'ireo programa izay nanjary fenon'ny Heroo
Na raha tianao novaina iray. Nanandrana ny fampidirana Modaco tany am-boalohany aho ary nifikitra tamin'ity farany. Manitsy olana vitsivitsy amin'ny HTC izy io (toy ny fidirana amin'ny pin'ny SIM rehefa very ny fandrakofana) ary manampy fanatsarana sasany toy ny fifantohan'ny fakantsary amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny efijery. Fa ho an'ny tsiro dia misy loko. Ary raha tsy tianao dia mametaka iray hafa ianao.
Ny kinova rotaka an'ny modaco
Sintomy eto ihany koa ny kinova farany an'ny Radio
Ankehitriny dia omeko antsipirihany izay nataoko sy ny lamina nanaovako azy.
Notsidihiko eto ny kinova Core an'ny Modaco:
Ary nametraka azy aho. Ho an'ity, ny zavatra tsy maintsy ataonao dia ny hamerenana ny anarana hoe ity rakitra ity amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny anarana.zip ary ampitao any amin'ny faka-SD
Novonoinao izao ny terminal Hero anao ary averinao indray amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Shut down sy ny bokotra Home amin'ny fotoana iray. Notehirizinao io mandra-panombohany amin'ny fomba fanarenana.
Ny zavatra voalohany hataonay dia ny kopian'ny NAND, raha sendra misy tsy mandeha amin'ny fandidiana. Mba hanaovana izany amin'ny trackball dia midina ao amin'ny menio ianao ary misafidy backup backup Nandorid 2.2. Ity dia hanao kopian'ny nand amin'ny karatra SD-nao, izay anoroako anao ihany koa mba hitsitsy amin'ny solosainao sao sendra misy zavatra mahazo ny SD-nao ary very azy tsy nahy ianao. Ny folder izay hoforoniny ao amin'ny SD anao dia antsoina hoe nanddroid.
Eny, ny zavatra hataontsika manaraka dia ny fametrahana ny ROM vaovao, noho izany dia safidinao amin'ny baolina ny tabilao Apply sdcard: update.zip
Ary manaraka ireo dingana voalaza eo amin'ny efijery ianao. Raha tadidiko tsara dia hangataka anao hanamafy ny fametrahana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny lakilen'ny Home (trano)
Vantany vao vita ny dingana dia mila averinao indray ny HERO anao. Tsindrio mandritra ny segondra vitsy ny bokotra miaingà ary tsindrio indray raha hamono azy. Ary miandry ny hanombohany. Mety maharitra ela. Miandry…
Ho saika vonona ny findainao. Ankehitriny dia mila manavao ny Radio ianao.
Raisinay ny fisie an'ilay kinova farany tamin'ny radio izay navoakanay teo aloha ary averinay ny hetsika. (Adikainay amin'ny karatra SD izany, ovay anarana izy io update.zip, avereno amin'ny fomba fanarenana, ary safidio ny Safidy sdcard: update.zip)
Te hitsapa ny lohahevitra Wavesecure ihany aho tamin'ny farany, izay programa iray hiarovana ny maherifonao raha sanatria misy halatra, hahafahanao mahita azy, manakana azy amin'ny toerana lavitra sns .... Napetrako ity fonosana ity:
manaraka ireo dingana mitovy.
Ary tachánnnn efa napetrakao ny Maherifonao hametraka izay tadiavinao tsy misy olan'ny habakabaka.
Zavatra iray, ny programa Flasher Recovery dia tsy mila izany intsony, ary azonao esorina izany.
Zavatra hafa. Hitako fa maro ny olona manana olana hampifanarahana ny PC, tsapako fa ny olana amin'ny ahy dia tsy an'ny mpamily na zavatra hafa toa izany. Ny olana dia ny fampiasako ny programa Taskllier izay nampidiriko ny fizotran'ny fampifanarahana. Mba hanamboarana azy dia mila mamerina ny Hero fotsiny ianao ary atsofohy ao anaty solosaina.
Manantena aho fa manampy anao izany.
Mamaly an'i Petrium
@alfon sy micky14: ny olanao dia ny tsy fanananao mpamily napetraka tsara. mila olona mahalala kely momba ny windows ianao hijerena ny fametrahana ireo mpamily. Tsy maintsy apetrakao ireo mpamily ADB izay tonga ao anaty fampirimana Android SDK izay tsy maintsy sintominao. Rehefa manana izany ianao dia afaka manohy ny torolàlana.
Mahafantatra bebe kokoa momba ny Windows aho ary apetrako ireo mpamily sdk fa tsy misy mametraka azy toy ny installer boot mobile hardware na zavatra toa izany. fa rehefa miditra amin'ny cmd.exe aho dia mametraka fitaovana adb dia milaza amiko ny lisitra atached na zavatra toy izany ...
Mety izany ve ny fomba fijery?
Nanandrana XP aho ary koa, mety tsy mandeha ireo mpamily SDK ankehitriny? Miaraka amin'ireo SDK Drivers dia mametraka ny finday amin'ny interface Andrid fastboot. Saingy mbola tsy misy na inona na inona ao amin'ny console intsony ... tsy hitako intsony izay hatao
Tena mino aho fa izy ireo no mpamily vaovao entin'ny SDK, misy afaka mandefa ahy ve ilay sdk taloha? Tsy azonao atao intsony ny misintona ny tranonkala satria tsy mamela anao ilay vaovao intsony ... mila fanampiana aho
Miki14 manandrana ny maody nolazaiko tetsy ambony.
Petrium Miezaka ny hanaraka ny dianao aho fa rehefa tsy maintsy manoratra momba ny img aho dia tsy avelako tsindrio ny bokotra img fanarenana flash… raha afaka manampy ahy ianao
Micky14 toa izany koa no nitranga tamiko. Raha tsindrio ny faritra mainty eo ankavanan'ny bokotra backup dia hiseho ny asterisk. Heveriko fa ny olana dia ny tsy famelany anao hisintona raha tsy manao backup aloha. Andao hojerentsika raha toa ka mandeha io.
Ok aho efa namelatra ny fanarenana, namorona ny nomaniny ho solon'izay nand ary ankehitriny dia misintona ilay rom an'ilay maherifo rotated tany am-boalohany aho… rehefa apetrako izany, ho vita ve ny zava-drehetra? Hanana ilay maherifo amin'ny roman'ny orinasa ve aho ary hihodina? Misaotra noho ny anjara birikinao, amin'izao fotoana izao ihany no azoko arahana
Eny, vita ny zava-drehetra raha manana ny fisarahana sd ianao. Aza adino ny manavao ny radio. Ary heveriko fa tsy haharitra ela akory ny fanandramanao ny onjan'i Modaco. Ankafizo.
Tonga lafatra ny zava-drehetra, gracas petrazia maro.
Ny hany zavatra dia mahatonga ahy ho tezitra tsy nahavita namaha ny zava-misy fa tsy hitan'ny pc ny finday amin'ny adb.
olan'ny mpamily izany
Micky rehefa hitanao dia ampahafantaro ahy ny antony tiako esorina ny fampiharana sasany ary mila ataoko amin'ny adb misy rà izany.
Alao ny fombanao amin'ny root miasa amin'ny htc hero efa navaozina?
Alfon, raha ny amiko dia maherifo mahery vaika HTC namboarina.
Petrium avy eo ho ahy dia mety ihany koa ... andramako amin'ny fombanao!
pretrium rehefa apetrako ny modaco ROm ary ovaiko ny anaran'ny fisie ary apetrako ao amin'ny foton'ny SD ary ampidiro recovey rehefa manindry mampihatra fanavaozana sdcard.zip milaza amiko E: tsy afaka manokatra /sdcard/update.zip (tsia rakitra na lahatahiry toy izany) inona no ataoko?
tsy misy tsy voavaha!
alfon: Tsy afaka milaza aminao fotsiny aho fa manamarina ianao fa ny rakitra zip nakarinao dia tsy simba (Andramo esory amin'ny solo-sainanao izany fa tsy misy lesoka miseho) ary avereno amin'ny SD-nao.
Ny zavatra faharoa hahazoana antoka fa tsipelina tsara ny anarana.
Farany, andramo ny menio fanarenana (Ampiharo ny zip rehetra avy amin'ny sd) raha te hahalala anao raha mahafantatra anao ny zip avy amin'ny SD-nao. Mitandrema fa mety ho ny ZIP an'ny ROM tianao ho entina fotsiny izy.
Ary farany, manandrana mamolavola SD indray aho na manandrana SD hafa. Raha mbola apetrakao ao anaty faka ilay rakitra fanavaozana.zip dia tokony ho lavorary ny zava-drehetra.
Zavatra iray hafa izay noheveriko ho zava-dehibe fa raha sanatria ka dia ataoko anao izany. Heveriko fa tamin'ny solo-sainanao dia nesorinao ny safidy hanafenana ireo fanitarana ireo rakitra fantatra, sa tsy izany? Izany hoe eo amin'ny solosainao no ahitanao ny fanitarana rakitra? Raha tsy izany dia inona no hitranga aminao fa tsy ny fanovana azy io ho toy ny update.zip no hanononanao azy ho update.zip.zip satria toa takona afenina ilay fanitarana.
Mila miasa ho anao izy io, ka aza milavo lefona.
Manome fandraisana anjara tsara ianao, azo antoka fa hanampy olona maro hiverina sy hamaky izay rehetra niaretanao izany, ka mahaliana tokoa ny manazava ny fomba namahanao azy io hatrany.
etsy ankilany misy hevitra fohy momba ny fanarenana: aza mamono tena manova ny anarana hanavao.zip ary mamafa azy isaky ny te hampiasa fanavaozana vaovao ianao, azonao atao ny maka tahaka azy ireo ho .zip miaraka amin'ilay anarana tadiavinao, ary avy eo safidio ny safidy hametahana zip misy anarana, ary safidio ny lisitra izay mivoaka ny fanavaozana anananao ao amin'ny sd.
Ahoana ny amin'ireo mpamily mba hahafantaran'ny adb ahy ny htc tsy vitako ... hiala aho
petrium misaotra betsaka noho ny famantarana! Izao fotsiny aho mila manamboatra ny olana amin'ny Los Jodidos ADB ... izay tsy miseho na aiza na aiza ...!
@alfon Handefa. Hanohy ihany koa ny famotopotorana ny ADB aho, hahitako raha toa ka tsy hiara-miasa amin'ny mpamily voaozona ny terminal-anay.
@sik_gerar Afaka nanao tutorial tamin'ny fomba maodely izahay mba hahafahanao mamoaka azy amin'ny lahatsoratra Androisis. Inona ny hevitrao?
Pedro @ Raha ny marina rehefa nentin'izy ireo tamiko ilay htc volomboasary dia nampifandraisiko tamin'ny voalohany io azoko ilay zavatra adb ary avy eo rehefa nametraka ilay sync aho tamin'ny tanana, dia lasa ilay zavatra ADB, ary avy eo tsy niseho intsony ....
alfon @ Fa aiza marina no tokony hisehoan'ny ADB? satria amin'ny manager manager dia tsy hita izany, ary tsy misy hadisoana mpamily koa. Fa manana ny HT miharo amin'ny PC tsy misy olana aho.
Pedro dia toa te hahita anao ao amin'ny mpandrindra ny fitaovana ary heverina fa tsy maintsy apetrakao amin'ny tanana satria ireo mpamily tonga ao amin'ny mpampiditra Sync dia manana làlana amin'ny teny anglisy ary izany no antony rehefa apetrakao dia manana hadisoana ianao.
Rehefa nametraka fampandrenesana voalohany ianao dia nanome anao hadisoana izany, sa tsy izany?
omeo ahy ny msn-nao mba hiresaka tsara kokoa izahay!
@pedro, raha efa namaky ny hafatra teo amin'ny efijery voalohany ianao dia mitady mpanonta. raha te hisoratra anarana ianao ..
@micky: efa nojereko kely ilay hazo. raha hanomboka ianao -> tontonana fanaraha-maso -> rafitra -> fantsom-pitaovana -> mpitantana fitaovana dia mila mivoaka ianao:
[+] Fitaovana usb Android
ambany be ...
kapila kapila [+]
–Fitaovana finday Android finday Android HTC
Eny, ny voalohany dia ny adb ary ny faharoa dia ny mpamily fitehirizana USB. Raha te hametraka indray ny mpamily adb ianao dia esory ny maherifo, fafao ilay voalohany (kitiho ary vonoy) avy eo ampifandraiso izany. Tokony hahazo ny efijery fifidianan'ny mpamily ianao.
Tsy miseho fitaovana USB usb i Gerardo ami… ..nitady sy nitady ianao fa tsy nipoitra, izany no olana mahazo ahy izay miseho, ary raha toa kapila kapila no miseho. Inona no vahaolana amin'izany?
mm ... azonao atao ny manandrana mampifandray ny fandaharam-potoana, mankanesa any amin'ilay tsipika asna mankany amin'ilay kisary «tapakao soa aman-tsara, ary kapohy indroa, mahazo varavarankely kely ianao, misafidy ny fandaharam-potoana ary kitiho ny« fananana », ary ao amin'ny takelaka mamela anao hanavao ny mpamily. manandrana…
Marc dia hoy izy:
Voalohany indrindra misaotra an'ity lesona ity,
ny fitaovana adb dia manome ahy ny ID an'ny findaiko, «Lisitry ny fitaovana mifatotra»: ht99LL…. fa rehefa mihazakazaka ny "adb shell cat / sys / class / mmc_host / mmc1 / mmc1: * / cid" aho dia mahazo "TSY HITA"
Valiny tamin'i Marc
Efa nanandrana baiko adb hafa ve ianao mba hahitana raha olana io baiko manokana io sa raha olana amin'ny fifandraisana amin'ny telefaona?
Raha tsy hita dia miseho, mety tsy manana ilay baiko manokana, ilay rakitra angatahinao, na mety tsy mahita ilay telefaona. jereo hoe inona izany ..
vonjeo azafady amin'ny tranokala hafa ireo taco, manandrana mitazona ny fahadiovan'ny tranokala izahay.
mandraka androany dia heveriko fa miasa ho an'ny maherifo ny z4root. esorinao eny an-tsena izany, ary ianao no mitantana azy. amin'ny fanandramana dia tsy misy very.
MPIKOMY dia hoy izy:
Salama daholo, jereo, manana olana aho. ny htc wildfire-ko miorim-paka sy s-off. Nametraka rom vaovao aho ary nazerako ny telefaona dia nivoaka ny bateria. Ankehitriny rehefa mandrehitra azy aho dia mahazo efijery fotsy ary tsy misy zavatra hafa inona intsony no azoko atao? ahoana ny fametrahana indray ny zava-drehetra? Misaotra anao
Mamaly an'i rebeldeyo
sik: gerar dia hoy izy:
ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny HERO, fa tsy ny WILDFIRE.
Raha manana olana HARDWARE ianao dia tokony hanarona azy ny fiantohana, na dia efa nesorinao aza ny fiantohana SOFTWARE.
Valiny amin'ny sik: gerar
Romel_91_2005 dia hoy izy:
ny kinovan'ny firmware-ko dia: 2.1-update1….
Ambany noho ny k anananao io, marina? Eny, milaza ianao fa nampiasa flashrc aho mba hametahana hboot vaovao ary hahafahana mamaka na mametaka ROM manokana
Azonao lazaina amiko ve ny fomba anaovako izany?
Valiny amin'i Romel_91_2005
ANDROID 2.0, VAOVAO SY NY LALANA
MYBACKUP, FOMBA HANAOVANA BACKUPS AMIN'NY ANDROIDO